Faarax C/qaadir oo mar kale kasoo dhex muuqan doona Golaha Wasiiradda… | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Faarax C/qaadir oo mar kale kasoo dhex muuqan doona Golaha Wasiiradda…
Warar dheeri ah oo aan heleyno ayaa sheegaya in sababta isku shaandheynta Golaha Wasiiradda loo sameynayo ay tahay in Liiska Golaha lagu soo daro Faarax Cabdiqaadir.
Faarax Cabdiqaadir ayaa ahaa Wasiirkii hore ee Dastuurka iyo Cadaaladda, waxaana Golaha laga reebay markii isaga iyo Saxiibadiisa ay ka horyimaadeen Barlamanka Federaalka.
Dadka falanqeeysa Siyaasadda waxa ay leeyihiin Faarax Abdiqaadir, waa Maskaxdii ka dambeysay in uu xilka qabto Madaxweyne Xassan Sheekh , waxaana lagu tiriyaa waxa ay Siyaasiyiinta ugu yeeraan Damjadiid.
Illo ku dhow Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyadda ayaa laga soo xigtay in wax shaki ah uusan ku jirin Wasiirkii hore ee Cadaaladda uu mar kale kasoo dhex muuqan doono Golaha Wasiiradda.
Hase ahaatee waxaan wali kala cadeyn xilka loo magacaabayo Wasiir Faarax, waxaase suuragal ah in labo xil midkooda loo magacaabo, mid waa Wasaaradda Cadaalladda iyo Dastuurka mida kale ee Wasiirka Madaxtooyada.
Isku shaandheynta ayaa qorshaha waxa uu yahay inay dhacdo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, iyada ay u muuqato in Faarax iyo Saxiibadiisa aysan ka hor imaan karin Barlamanka maadaama isbadalka uusan u baahneyn ansixinta Barlamanka.
Madaxweyne Xassan Sheekh waxa uu sheegay toddobaadkaan waxa uu beeniyay in isbadal lagu sameynayo Golaha Wasiiradda, hase ahaatee waxa uu warkiisa daba dhigay in la badalayo Wasiirkii aan gudan shaqadiisa.